Takelaka misy rohim-pifaneraserana any Shina - orinasa sy mpamokatra lavaka 2 | Shuangyang
takelaka misy rohim-bohy - 2 lavaka
Famerenana amin'ny laoniny ny Neurosurgery, fanamboarana ireo kilem-bolo, ampiasaina amin'ny fametahana ny karandoha sy ny fifandraisana.
• Tsy misy atoma vy, tsy misy magnetisation amin'ny sahan'andriamby. Tsy misy fiantraikany amin'ny × -ray, CT ary MRI aorian'ny fandidiana.
• Toetra simika miorina, biocompatibility tsara ary fanoherana ny harafesina.
• Hamafin'ny hazavana sy avo. Arovy ny olan'ny ati-doha.
• Fibroblast dia afaka mitombo ao anaty lavaka volom-borona aorian'ny fandidiana, hahatonga ny titanium harato sy ny tavy hampidirina. Fitaovana fanarenana intracranial tsara!
screw2.0mm visy fandavahana tena
fanapahana tariby (hety hety)
Ny lovia roa mahitsizoro dia rafitra mirindra sy feno manome fahafaha-manao, mora ampiasaina, ary implant sy fitaovana avo lenta. Mombamomba ny plate-screw ambany amin'ny 0,5 mm ho an'ny palpability implant kely. Rafitra fitaovana tokana ho an'ny fanamafisana haingana ny valin'ny taolana kranial.
Ny karan-doha dia rafitra bony izay mamorona ny lohany amin'ny vertebrata. Taolana karan-doha dia manohana ny firafitry ny tarehy ary manome lava-piarovana. Ny karandoha dia misy ampahany roa: cranium sy ny mandible. Ireto faritra roa amin'ny olombelona ireto dia ny neurocranium sy ny taolana misy ny taolana izay taolana lehibe indrindra ao aminy. Karakarao ny karandoha, amboary ny halaviran'ny maso roa, amboary ny positon-tsofina hahafahan'ny lokon'ny feo manondro ny lalana sy ny halaviran'ny feo. Matetika mitranga vokatry ny trauma mahery vaika, ny vaky karandoha dia mety ho tapaka ao amin'ny iray na amin'ny sasany amin'ireo taolana valo mamorona ny faritra cranial amin'ny karan-doha.
Ny vakivaky dia mety hitranga eo amin'ny na eo akaikin'ny toerana misy ny fiatraikany sy ny fahasimban'ny rafitra eo ambanin'ny karan-doha toy ny fonosana, lalan-dra ary ny ati-doha. ny vaky karandoha dia manana karazany efatra lehibe, dia ny linear, ny depressed, ny diastatic ary ny basilar. Ny karazana mahazatra indrindra dia ny vaky volo, fa tsy mila manao fitsabahan'ny dokotera. Ny fivalanana diastatic dia manitatra ny fanjaitan'ny karan-doha ka misy fiantraikany amin'ny zaza latsaky ny telo taona.
Vaky karandoha ketraka. Voadona amin'ny tantanana, vato na voadaka amin'ny lohany ary karazana trauma an-tendrony hafa izay matetika miteraka vaky karandoha ketraka. 11% amin'ireo ratra mafy eo amin'ny loha no miseho amin'ireto karazana tapaka ireto dia tapaka tapaka izay ahafahan'ny taolana tapaka miala ao anatiny. Ny vaky karandoha ketraka dia miteraka risika be amin'ny fitomboan'ny tsindry amin'ny ati-doha, na ny fandehanan'ny rà mandriaka ao amin'ny ati-doha izay manorotoro ilay sela marefo.
Rehefa misy laceration amin'ny vaky, dia hitranga ny vaky karandoha mahakivy. mametraka ny lava-pako ao anaty fifandraisana amin'ny tontolo iainana ivelany, mampitombo ny mety ho fandotoana sy ny aretina. Ao amin'ny vaky fahakiviana sarotra, dia rovitra ilay matotra. Ny fandidiana dia tsy maintsy atao mba hahavaky ny taolana misy ny karan-doha, mba hampiala ny taolana hiala amin'ny ati-doha raha manery azy izy ireo amin'ny alàlan'ny fanaovana lavaka burr amin'ny karan-doha mahazatra mifanila aminy.
Ny karandohan'ny olombelona dia mizara roa amin'ny anatomika: ny neurocranium, noforonin'ny taolana cranial valo izay mitahiry sy miaro ny ati-doha, ary ny taolana amin'ny tarehy (viscerocranium) misy taolana efatra ambin'ny folo, tsy ao anatin'izany ny ossicle telo amin'ny sofina anatiny. Ny vaky taolana dia mazàna midika ho tapaka ho an'ny neurocranium, raha ny vaky ny ampahany amin'ny karandohany kosa dia vaky tarehy, na raha vaky ny valanorano, vaky mandibular.
Taolana cranial valo no sarahina sutures: taolana iray eo anoloana, taolana parietal roa, taolana ara-nofo roa, taolana okipitaly iray, taolana sphenoid iray ary taolana etmoid iray.
Manaraka: takelaka ifandraisana fossa temporal
Takelaka Titanium Crlink Interlink Anodized
Takelaka Titanium Interlink Titanium Cranial
Takelaka Titanium Fohy mifampitohy Cranial
orthognathic 0,6 L lovia 4 loaka
cranial snowflake harato I
Takelaka anatomika orthognathic 0,8 L
lozam-pifamoivoizana maxillofacial micro 90 ° L lovia
fanidiana lovia kely mahitsy maxillofacial